‘पुराना कुरा सम्झिएर कहिलेसम्म धारणा बनाउने? चुनाव जित्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरौं’:देउवा • Nepal's Trusted Digital Newspaper‘पुराना कुरा सम्झिएर कहिलेसम्म धारणा बनाउने? चुनाव जित्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरौं’:देउवा • Nepal's Trusted Digital Newspaper
‘पुराना कुरा सम्झिएर कहिलेसम्म धारणा बनाउने? चुनाव जित्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरौं’:देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बहुमतले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने विचार कांग्रेस नेताहरूले राख्नुभएकाे छ। योसँगै कांग्रेसले आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। ‘गठबन्धन भनेको कम्युनिष्ट एक हुन नदिने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो,’ बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भन्नुभयाे।
कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको समयमा गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रष्ट पार्नुभएकाे छ। जिल्ला पुगेर आएका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीबाट आएका फरक–फरक मत सुनेपछि सभापति देउवाले बैठकमा भन्नुभयाे, ‘यस भन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन नहुँदा धेरै साथीहरू पराजित हुनुभयो भन्दै सत्तामा भएको बेला फेरि पनि त्यही किसिमको नतिजा बेहोर्न नपरोस् भन्नका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ।’
देउवाको भनाइ उधृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयाे, ‘गठबन्धन नहुँदा मैले मुस्किलले जिते। हाम्रो पार्टीमा एउटा गम्भीर रोग छ अन्तर्घातको। यो समाप्त भए गठबन्धन गर्नुपर्दैन। नत्र त जित्न पर्यो नि ! गठबन्धन नगरी चुनावमा जाने कुनै उपाय छैन। गठबन्धन गरेर जाने हो भने अहिले हामी बहुमतले जित्छौं। जित्नका लागि गठबन्धन नगरे अर्को के उपाय छ ?’
बैठकमा डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालगायतका केही नेताले गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै आफ्नो विचार राखेपछि देउवाले माओवादीले द्वन्द्वकालमा गरेको व्यवहारलाई लिएर धारणा नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभएकाे थियाे। देउवाले भन्नुभयाे, ‘पुराना कुरा सम्झिएर कहिलेसम्म धारणा बनाउने? चुनाव जित्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरौं।’